जनताहरुका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न वामगठबन्धन-Setoghar
जनताहरुका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न वामगठबन्धन
यस पटकको निर्वाचन र अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा के–कति भिन्नता छ ?
यसपटकको निर्वाचन र यस भन्दा पहिलेको निर्वाचनको अवस्थामा निकै नै भिन्नता छ । अघिल्लो पटक भएको निर्वाचन नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान ल्याउनको निम्ति भएको थियो । तर यसपटकको निर्वाचन मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघी बढाउनको निम्ति भएको हो । विगत सम्म रहँदै आएका वाधाअवरोधहरु फुकाएर स्पष्ट रुपमा स्वतन्त्र तवरले निर्वाचन गर्न सकियोस् भन्ने मान्यताले यस पटकको निर्वाचनमा वाम मोर्चा समेत बनाइएको छ । पुँजीवादी शक्तिहरुले जहिले पनि शासनसत्तामा कब्जा जमाउने अवस्था कायम रहँदै आएकोमा यस पटक नेपाली जनताहरुका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने स्पष्ट योजना सहित बामपन्थीहरु एक भएर निर्वाचनमा लागेका छौं । हाम्रै कारणले सृजना भएका कमजोरी, विधिहीनता, असुरक्षा, लगायतका नेपालका परिस्थिति अन्त्य गर्ने योजनाको साथ नेपालमा अहिले वामपन्थी गठबन्धन एक ठाऊँमा उभिएको हो । नेपालमा भएका युवाहरुलाई नेपालमा नै रोजगारी सृजना गर्ने काममा पनि अहिलेको गठबन्धनले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ ।
नेकपा (एमाले) भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार
भक्तपुरको विकासको निम्ति तपाईं नेतृत्वको कमिटीबाट के काम हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ?
भक्तपुरकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेले अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता ठान्छु । अहिले सम्म यहाँका स्थानीय जनताहरुको जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावना अनुरुप काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ । हाम्रो भक्तपुरको विकास पछाडि नै रह्यो । हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ पाएनौं । कहिले नेमकिपालाई जितायौं । कहिले काङ्ग्रेसलाई जिताएर पठायौं । नेमकिपाले संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने भन्दै आएको भएपनि उसले कुनै पनि किसिमले विकासका पहल गरेन । विकास गर्ने काम सांसदको नभइ स्थानीय तहको हो भन्ने मान्यता मात्र राख्दै आयो भन्ने बुझाई मैले जनताबाट बुझेको छु ।
भक्तपुरको विकासको अहिलेको अवस्था के छ ? अब कस्तो बन्नुपर्छ ?
अहिले भक्तपुरमा मेलम्चीको पानी भण्डारनको निम्ति ट्याङ्की बनाईंदैछ । काठमाडौंको वीर अस्पतालालाई ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा रहने गरी भक्तपुुरमा स्थापना गरिँदैछ । मुहानपोखरीमा ठूलो ड्याम बनाएर आकाशेपानी सङ्कलन गर्ने, पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने, भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगरी घोषणा गर्ने लगायतका कामहरु भक्तपुरमा ह्ँदैछन् । यी कामहरुको निम्ति निम्ति करिब ४८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा पनि भक्तपुर विकासको निम्ति प्रयाप्त कामहरु भएका थिए । भक्तपुर हुँदै चीनबाट भारत लैजाने सडक लगायत बोडे, मूलपानी, सल्लाधारी, दधिकोट, लुभु लगायतको क्षेत्रमा सडक विकासको निम्ति पनि प्रयाप्त पहल भएका छन् ।
यसको अलावा नेपालका युवाहरुलाई हामीले अध्ययन तथा अनुसन्धानको निम्ति पनि प्रयाप्त लगानी गरिनु जरुरी रहन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा भएको बजेट घाटालाई पूर्ति गर्नको निम्ति हामीले आत्मनिर्भर अर्थनीति कसरी बनाउन सक्छौं त ? जुन निकै महत्वपूर्ण विषयको रुपमा रहेको छ । यो नै हाम्रो मुख्य चुनौतीको विषय हो ।
यदि हामीले कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउनको निम्ति बाँझो जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउने नीति अबलम्ब
न गर्ने हो भने नेपालमा नै करिब १२ लाख युवालाई रोजगारी दिन दिन सकिन्छ । अहिलेकै कुरा गरौं, भूकम्प पश्चात् नेपालमा निर्माण गरिँदै गरिएका करिब ५ लाख घरहरु निर्माणको निम्ति कि त कामदारहरु भारतबाट आएका छन् कि त चीनबाटै आएका छन् । तर नेपालमा भएका युवाहरु नेपालमा नै बसेर घर बनाउने, रङ लगाउने लगायतका श्रममा आधारित काम गर्न भने रुचाएको अवस्था छैन ।
हामी भन्दा अघिल्ला पुस्ताले विभिन्न हड्ताल र आन्दोलनमा नै बिताए । अहिले नेपालमा संविधान बनेको २ बर्षमा हामी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्ने मान्यताले बामपन्थीहरु एकै ठाउँमा उभिएका छौं । हामीले चाहेबमोजिमको समृद्धि प्राप्तिको निम्ति युवाहरुलाई प्रयाप्त स्थान दिइनुपर्छ, सीप र प्रविधिमा उनीहरुलाई दक्ष बनाइ क्षमता बमोजिमको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । हाम्रो युवा नीतिले पनि युवाहरु भनेका भविष्यका कर्णधार नभइ वर्तमानका हिस्सेदार नै हुन् भन्ने कुरा आत्मसात् गरेको अवस्था छ । यसैकारण युवाहरुलाई अधिक जिम्मेवार बनाई छिटो मुलुकको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
अहिले युरोपियन मुलुकहरुको जनसङ्ख्या घट्दो छ । यसैकारण उनीहरु विदेशबाट महँगोमा श्रम किनेर जनशक्तिहरु लिइरहेका छन् । कतिपय जापान वा युरोपमा असफल भएका मकम्पनीहरु पनि चीनमा भने निकै राम्रो तवरले चलेको पाउन सकिन्छ । यसो किन भयो भनेर पनि अध्ययन गर्ने हो भने हामीले निकाल्ने निष्कर्ष भनेको चीनमा सस्तो श्रम मूल्य र प्रयाप्त जनशक्तिको उपलब्धतालाई नै महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । जसले गर्दा चीनले विश्वलाई छोटो अवधिमा नै चुनौती दिने क्षमता विकास गरेको छ ।
ठीक नेपालमा पनि त्यस्तै सम्भावना छ । यसैकारण अबको १५-२० बर्षपछि हामी पनि युरोपियन मुलुकको अहिलेको अवस्थामा पुग्नेवाला छौं । यसको कारण भनेको अहिलेको सचेत पुस्ता धेरै सन्तान जन्माउन चाहँदैन । जसले गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धिदर निकै कम हुनेछ । यसैकारण हाम्रो अल्पविकसित देशको सूचीमा परेको नेपाललाई विकसित देशको रुपमा विकास गर्नको निम्ति नेपालमा युवा वर्गलाई परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।